Rosia: Vohikala Mampiseho Ny Karaman’ny Mpiasam-Panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2012 12:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Magyar, বাংলা, Français, Español, русский
Najoro ny tetikasa “Tombontsoam-bahoaka” [ru] mba hahitan'izay liana hahafantatra ny mombamomba ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ny lefitry ny manampahefana ambony. Narafitra tamin'ny alalan'ny nangonin'ny olona ary navoaka araka izay mifanaraka amin'ny lalàna Rosiana ny fampahafantarana.
Ohatra, Alexander V. Gilderman [ru], Lefitry ny departemanta rezionaly misahana ny fikojakojana, manana trano sy tany mirefy 4.433 metatra toradroa (1.1 acres).
Saingy ny tompon-dakan'ny manana harim-pananana dia i Igor I. Shuvalov [ru], izay mihoatra ny 14.652.000 robla (eo ho eo amin'ny 505.240 dolara amerikana), izay mbola mandrafitra ny 4% n'ny fidirambolan'ny fianakaviana iray manontolo.
Fa ny tompondakan'ny mpiasam-panjakana rehetra manerana an'i Rosia kosa dia i Yuri Trutnev, izay mahazo ny ambony indrindra eo amin'ny 114 tapitrisa robla (3,7 tapitrisa dolara amerikana) sy vola vahiny (ary tsy vola vahiny kely an). Indrisy fa nidina ny fidirambolany tamin'ny 2010, saingy antenaina fa hihatsara. manomboka izao, afaka mandositra tsy miasa intsony izy mivady sy ny zanany efatra (raha tsaraina amin'izay anaovany fanambarana).
Jereo ato ny lahatsoratra nadika [ru].